घर जग्गा बिक्री केन्द्र
घर जग्गा बिक्री केन्द्र t एक घर जग्गा बिक्री केन्द्र हो। मूल वास्तुशिल्प फारम एउटा गिलास वर्ग बक्स हो। समग्र भित्री डिजाइन भवनको बाहिरी भागबाट देख्न सकिन्छ र भित्री डिजाइन बिल्डिंगको उचाइले पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यहाँ चार समारोह क्षेत्रहरू, मल्टिमेडिया प्रदर्शन क्षेत्र, मोडेल प्रदर्शन क्षेत्र, कुराकानी सोफा क्षेत्र र सामग्री प्रदर्शन क्षेत्र छन्। चार समारोह क्षेत्रहरू छरिएका र पृथक देखिन्छन्। त्यसैले हामीले दुई डिजाइन अवधारणाहरू प्राप्त गर्न सम्पूर्ण स्पेस जडान गर्न एक रिबन लागू गर्‍यौं: १. कार्य क्षेत्रहरू जडान गर्दै २. भवन निर्माणको गठन गर्दै।
कार्यालय भवन साइटमा ठाउँ अनियमित छ र भवनको बाहिरी भित्ताको कारण घुमाउरो छ। त्यसकारण डिजाइनरले प्रवाहको धारणा लागू गर्दछ यस प्रवाहमा प्रवाहको भावना सिर्जना गर्ने आशाको साथ र अन्तमा बगिरहेको लाइनहरूमा रूपान्तरण हुन्छ। सर्वप्रथम, हामीले सार्वजनिक गलियाराको नजिकको बाहिरी भित्ता ध्वस्त पार्यौं र तीन प्रकारका क्षेत्रहरू लागू गर्‍यौं, हामीले तीन क्षेत्रहरू परिक्रमण गर्न एक प्रवाह लाइन प्रयोग गर्‍यौं र बाहिरबाट पनि प्रवाह रेखा नै प्रवेश द्वार हो। कम्पनी पाँच विभागमा विभाजित छ, र हामी ती प्रतिनिधित्व गर्न पाँच लाइनहरु प्रयोग गर्दछौं।
डिजाइन / बिक्री प्रदर्शनी यो दुबै डिजाइन र उपन्यास अपरेसनल अवधारणा हो जसले "डाइफोर्म" प्रदर्शनीलाई यत्तिको नवीन बनाउँछ। भर्चुअल शोरूमका सबै उत्पादनहरू शारीरिक रूपमा प्रदर्शनमा छन्। आगंतुकहरु न विज्ञापन र न बिक्री स्टाफ द्वारा उत्पादन बाट विचलित छन्। प्रत्येक उत्पादनको बारेमा अतिरिक्त जानकारी मल्टिमेडिया डिस्प्ले वा QR कोड मार्फत आभासी शोरूम (अनुप्रयोग र वेबसाइट) मा फेला पार्न सकिन्छ, जहाँ उत्पादनहरू पनि घटनास्थलमा अर्डर गर्न सकिन्छ। ब्रान्डको सट्टा उत्पादनलाई जोड दिदै अवधारणाले उत्पादहरूको रमाईलो दायरा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
टोयोटा "सक्रिय शान्त" को जापानी सिद्धान्तबाट प्रेरित, डिजाइनले तर्कसंगत र भावनात्मक तत्वहरूलाई एक एकाइमा मिलाउँछ। वास्तुकला बाहिरी भन्दा हल्का र शान्त देखिन्छ। तैपनि तपाईं यसबाट फ्याँकिने ठूलो शक्ति महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको हिज्जे अन्तर्गत, तपाईं उत्सुकताका साथ भित्री भाग। एकचोटि भित्र जानुभयो भने, तपाईंले आफैलाई आश्चर्यजनक परिवेशमा पाउनुहुनेछ जुन ऊर्जाले भरिएको छ र ठूलो मिडिया भित्ताहरूले भरिएको छ ऊर्जावान, अमूर्त एनिमेसनहरू देखाउँदै। यस तरिकाले स्ट्यान्ड आगन्तुकहरूको लागि अविस्मरणीय अनुभव बन्छ। अवधारणाले असममित सन्तुलनको चित्रण गर्दछ जुन हामी प्रकृतिमा र जापानी सौंदर्यशास्त्रको मुटुमा पाउँछौं।
स्टोर त्यहाँ किन केही कारणहरू छन् जुन मैले लामो (meters० मिटर) अगाडि भित्तामा लगाएको छु। एउटा, त्यो थियो कि अवस्थित भवनको उचाई वास्तवमै अप्रिय थियो, र मसँग यसलाई छुने अनुमति छैन! दोस्रो, अगाडिको अनुहार घेरा हालेर मैले wall० मिटर भित्ता खाली गरें। मेरो दैनिक अवलोकन तथ्या study्कको अध्ययनका अनुसार अधिकांश पसलहरू जिज्ञासाको कारण स्टोर भित्र गए र यस अनुहार उत्सुक रूपहरूको पछाडि के भइरहेको छ हेर्नका लागि अधिकांश पसलहरू पसल भित्र गए।
रेस्टुरेन्ट शहरी बीट को विद्रोह काउन्टर। आधार व्यस्त यातायात चौराहेमा अवस्थित छ। समग्र स्थानिक योजनाको उद्देश्य एक मधुर र बसोबास गर्ने गति सिर्जना गर्नु हो, जस्तो कि समयलाई ढिला बनाउन र यस द्रुत गतिको शहरी जीवनमा प्रत्येक क्षणको आनन्द उठाउनको लागि। खुला योजना, गठन गरीएको छ, मध्यम योजना को माध्यम बाट, विभिन्न कार्यक्षमतामा आधारित स्पेस विभाजन गर्दछ। टोटेम-जस्तो स्क्रीनहरूले मधुर स्थानिक वातावरणमा केही जन्मजात खेलफिलता थप्दछ।
घर जग्गा बिक्री केन्द्र कार्यालय भवन डिजाइन / बिक्री प्रदर्शनी टोयोटा स्टोर रेस्टुरेन्ट